Gudoomiyaha Hayada Shaqalaha Dawlada Somaliland Oo Sheegay in Ay Ku Rajo Wayn yihiin In Ay Dhamaan Shaqaalaha Dawlada Fasaxaan Iyaga Oo Wixii Shaqo Ah Guryahooda Ku Qabanaya.
Tuesday March 24, 2020 - 17:00:39 in Wararka by Editor Caynaba News
Iyadoo isha aynu Ku hayno sida caabuqa coronovirus ee halista ahi ugu fidayo aduunka si gaar ahna isha ugu hayno wadamada jaarka. Waxa lagama maarmaan ah in la qaado talaabo, tab iyo xeelad kasta oo lagaga sii gaashaaman karo faafistiisa iyadoo la raacayo tilmaamaha wasaarada caafimaadka iyo Guddida heer qaran.
Waxa imika maanka lagu hayaa oo laga fekerayaa in shaqaalaha dawlada inta xiligan laga maarmi karo, daruurina aanay ahayn inay yimaadaan goobaha xafiisyada shaqada lafasaxo si ay guryahooda u joogaan iyadoo waxii shaqo looga baahdana guryaha Ku soo shaqayn doonaan balse ilaa hada waa rayi muhiim loo arko, waxaana go’aan ka soo saari doona Guddida heer qaran oo loo daba fadhiisanayaa.
Waxaan ku amaanayaa Guddida heer qaran ee ka hortaga faafista coronovirus sida ay dadaalkooda u wadaan sidoo kale Waxaan amaanayaa masuuliyiintii sare ee Wasaaradaha iyo Hayadaha dawlada, maayorka Caasimada iyo maayorada iyo gudiyada gobolada oo talaabooyin ka hortag oo fiican qaaday ilaa hadda. Ilaahay waxaynu ka baryaynaa in uu umadeena iyo muslinkaba baal mariyo cudurkaas, aduunyada inteeda kalena ka nadiifiyo.